Art. 231 Criminal Code uvame atholakala oyisazi. Crime siphazamise nempilo yomphakathi phakathi esiyingozi kakhulu. ukutshalwa Illicit izidakamizwa kwezidakamizwa kube nesidingo ukubhujiswa izimpilo eziningi, yingakho sivumele isishaya-mthetho kabanzi ngakho futhi ngokuqondile egqanyisiwe udaba emthethweni lobugebengu.
Izidakamizwa - yingozi empilweni yomuntu. Kulesi umqondo lenqwaba izincazelo nezibonelo, kodwa kwabaningi kukhawulwe kuphela ethandwa kakhulu futhi evamile, ezifana poppy elele amaphilisi, i-cocaine, i-heroin, insangu, futhi abanye abantu musa ngisho ukwazi ukuthi lolu hlu ukunwetshwa.
Nokho, nezidakamizwa - ukuthi liqukethe into eyenziwe uHulumeni Russian ohlwini eziyingozi futhi akuvumelekile. Lokhu kungaba kokubili izitshalo nezingxenye zayo, equkethe izakhi idatha engavumelekile. Ziyakwazi odabuka yemvelo, isib amakhowe, psilocybe, noma zokwenziwa, ukuthi ngamabomu adalwe indoda, ithi, i-cocaine. Konke lokhu, kungakhathaliseki ukungaguquguquki, buyisidakamizwa, yingozi impilo nokuphila.
Ukwakheka izakhi: into
Kwebalingisi of isenzo ngaphansi Art. 231 Criminal Code, ngokuvamile kudinga omningi. Chaza loko koniwa kungaba nzima ngenxa yokuthi zikhona nobunzima, ikakhulukazi ohlangothini umgomo mayelana nodaba. Nokho, into yokuqala ukuthi kudingeka ucabangele - uyinto, okungukuthi, ubudlelwane zomphakathi, abahlushwa izenzo izigilamkhuba.
Lobu bugebengu Sizoxoxa ngale ndaba izindaba eziphathelene nempilo yomphakathi. Kwezinye izimo, kungase akhululwe izinkinga ezengeziwe nezenhlalo ezithinta izimpilo zezakhamuzi, uma, yithi, ukutshalwa iye yabangela imiphumela enjengokufa. Isahluko se-Code equkethe lesi sihloko, sikhuluma ephathelene nokufaneleka ngokokuziphatha kwezinqubo nasemphakathini wonkana. Ingase futhi ukwenza njenge into, kodwa isicelo lento. 231 Criminal Code akusiyo ngempela ezifanele.
Isihloko okukhulunywa angenela khona ukuba kulinywe emthethweni izitshalo equkethe imithi kwezidakamizwa. Kodwa kuyini na? Uhlangothi inhloso, kuba ibonakalisa izenzo imvelo yangaphandle, emphakathini, kulesi simo itholakala ukutshala, okungukuthi nokuhlwanyela ukutshalwa labo noma ezinye eziyingozi empilweni. Lena imfuneko kwengoma.
Kubalulekile futhi ukuba ukhumbule ukuthi ukuze ube nekhwalifikheshini yisimo kubalulekile yobukhulu enkulu izitshalo kutshalwa, okuyinto ivunyelwe futhi wamukela nguHulumeni. Okwamanje ethize futhi kusho ukuthi uma ubuso usayizi esikhulu ngeke ufinyelelwe ke yezinhlobo icala izenzo ezinjalo azibona manifest.
Ngaphezu kwalokho, 'idla yodwa lapha labafanelekako izici: iqembu labantu, njengombana ihlelwe, futhi isivumelwano ngaphambi, futhi ezinkulu ikakhulukazi isikali kulinywe. Ngokwesibonelo, yande kakhulu ukutshalwa obungemthetho ka insangu. Lo mcimbi likwazi ngezinga elikhulu, okunikeza isizathu isicelo icala ingxenye amabili isihloko, futhi umkhuba kuqinisekisa nokudlanga umthetho.
Ngamunye isephulamthetho kungaba umuntu othile, okungukuthi, leseyifinyelele engu-nesithupha ibona Sane ngokuphelele. Lona ojwayelekile. Kukhona okuhlukile, okungukuthi zokunciphisa engu-iminyaka eyishumi nane, nokwanda kokungabi nesishiyagalombili. Nokho, esimweni icala ngaphansi Art. 231 Criminal Code, umthwalo namanje ezimweni eziningi livela engu-16.
izibonelo njalo uma wahlanganyela ukutshala izakhamuzi ezincane. Isibonelo okuphawuleka ukutshala izitshalo ezifana poppy soporific. Litholakala emizini yabazalwane, nokwenza zokutshala bakhe ikakhulukazi intsha. Nokho, uma awuvunyelwe ngezinga elikhulu emasimini, ukuthi, ngokufanele, asikho isidingo ukwethula lolu daba bese uletha labo obhekene ebulungisweni.
Iwayini lingumhleki Kumqoka kakhulu noma yibuphi ubugebengu. Siveza isilinganiso osonile izenzo ukuthi he bophezela. Njengoba yaziwa, kungashiwo kubonakala ngezindlela ezimbili. Ukoniwa izimisele ngenhloso, noma (ngokuqondile noma ngokungaqondile - akunandaba) noma ngokusebenzisa ukunganaki, budedengu noma ukunganaki.
Ngokuphathelene nezenzo embuzweni, ukutshala izitshalo ukuthi umthetho, njalo izinikele ngenhloso oqondile. Isihloko uyazi ukuthi wenza umzamo, uyaqaphela ingozi yalesi senzo futhi, okubaluleke kakhulu, ufuna ukuqala imiphumela engemihle ukuthi zingenzeka ngenxa yalokho. Ukuba budedengu noma ngenhloso engaqondile kulesi ingxenye ubugebengu, yebo, ungekho.
Lubhekele isenzo ngaphansi Article 231 Criminal Code
umkhuba yeKambiso ikhombisa nokudlanga ukusetshenziswa kwalesi sihloko. Ezimweni kwakamuva ku izidakamizwa ensimini babe Ezimweni ezinjalo lapho benzi bokubi ayesekhulile amakhowe psilocybe noma izibonelo zokutshala Hemp - konke lokhu kuhilelani isijeziso ukuthi zokhahlamba kusuka izinhlawulo zokuphatha sasejele. Ubukhulu zincike yebo ku kobukhulu ubugebengu futhi esebenzisa isihluku.
I eqinile futhi esiphezulu isigwebo ukuthi kungaba for ieala ngokulandela zeZigaba - kuyinto ejele iminyaka eyisishiyagalombili, okwenza ukutshala obungemthetho izitshalo aqukethe izidakamizwa, a felony. Futhi, ngokuvamile kanye Isilinganiso esisetshenziswa futhi ukuvinjelwa inkululeko isikhathi esifitjhani, kodwa inkinga uhlala cishe kuyo yonke indawo ku-ngokubona senkantolo.
Kubalulekile wazi ukuthi Article 231 alinikezi nhlobo ithuba oluphathelene nokukhululwa kwabo ekukhokheni necala lobugebengu. Iqukethe inothi, kodwa kuphela oloba ulwazi mayelana lokho okushiwo ngumuntu, noma, mhlawumbe nje, isikali ezinkulu ezinkulu. Ngakho, ngisho noma umuntu uye ngokuzithandela wayeka kulinywe, awusebenzi bamkhulule kusukela isijeziso esinobulungisa.
NekuBuyiselwa: Ikhodi-Criminal Procedure, ubuciko. 151
Isinqumo hhayi lokusungula zobulelesi. Ukulungiswa Sample elingenalutho
Article 111 Criminal Code of the Russian Federation (ushintsho)
Umphakathi Umthengi - kuyini?